BURMA: [Big Brothers & Sisters] အယူအဆလွဲရင် (အသိ) လွဲပြီး အ လို့ အ မှန်းမသိ...
[Big Brothers & Sisters] အယူအဆလွဲရင် (အသိ) လွဲပြီး အ လို့ အ မှန်းမသိ...
Bo K Nyein 03 July 01:56
အယူအဆလွဲရင် (အသိ) လွဲပြီး အ လို့ အ မှန်းမသိ ဖြစ်တတ်တယ်။
ဆရာ အတင်လွဲရင် အယူလွဲ တတ်ပါတယ်
ချိုတူးဇော် ရေ - နေသိပ်မကောင်းတာနဲ့ နားနေရလို့ ခုမှ အသေအချာ ဖတ်မိတယ်။ ခုလိုအရှည် ကြီး စိတ်ထဲရှိတာရေးပြတာ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ အမြင်ကိုသိရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဖတ်လိုက်တာနဲ့ အဒမ်စတစ် Adam Smith ရဲ့ Invisible Hand လို အရည်းကြီး ရဲ့ Invisible Hand ကို တန်းမြင်ရတာပဲ။ ၀ါဒ ရေးဆိုတာ ဘိန်းစွဲသလိုပဲ ခေါင်းထဲ ၀င်သွားရင် အတော် အဖြေရ ခက်တယ်။
ဗမာတွေရဲ့ အကျင့်က ဆရာတင်မိရင် ဆရာပြောတာတွေကို မျက်စိမှိတ် ယုံလိုက်ကြတယ်။ ဟုတ်၏ မဟုတ်၏ ကို မစဉ်းစားကြတော့ဖူး။ ဗမာပြည်မှာ က ဆရာဆိုရင် မိဖနဲ့ တဂိုဏ်းထဲ ထားတာကြောင့် ပြန်မေးရဲ တဲ့ ဓလေ့ မရှိဖူး။ ပြန်မေးရင် အာခံတယ် အထင်ခံရမှာ ကြောက်ကြတယ်။ ဗမာပြည်မှာ Journalism သင်ပြီးပြန်လာတဲ့ Australian အမျိုးသမီးတယောက် က ဗမာကျောင်းသာတွေဟာ မေးတာမြန်းတာ မရှိကြဖူး ဆွေးနွေးတာအားနဲတယ်လို့ ကောက်ချက် ချသွားဖူးတယ်။ ဒါ ယဉ်ကျေး မှုရော ဓါးမိုး အုပ်ချုပ်တဲ့ အာဏါရှင် စံနစ်အောက်မှာ ကြီးပြင်းရတာပါ ပါတယ်။ ဒီတော့ critical thinking ဆိုတာကို နားမလည်ကြဖူး။ ဒေါက်တာ ညီညီ တို့ကစပြီး ဖျက်စီးသွားတဲ့ ပညာရေး စံနစ်ကြောင့် လည်း အများကြီးပါ ပါတယ်။
စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ နော် Basic ကို မကြေပဲ ၀ါဒဖြန့်ချီရေး စကားတွေပဲ ထပ်ခါတ လည် လည် ကြားနေရတော့(နားလည်မှား) နေတာတွေ အများကြီးပဲ။ ဆရာကြီး ကိုယ်နှိုက် လက်တွေ့ အလုပ် မလုပ်ဖူးပဲ exposure အားနဲတော့ စာအုပ်ထဲက အသိ နဲ့ပဲ ရမ်း ချနေတာ တပည့်တွေ ခေါင်းးထဲ ရောက်သွားသည်လားမသိ။ အဆုံးသတ် မှာ …..
ပြည်သူလူထုရဲ့ အဆုံးစွန်သော အန္တိမလိုချင်တဲ့ အစိုးရပုံစံကတော့ အစိုးရမလို၊ စည်ပင်သာယာပဲ လိုတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ကို ဟိုဟာလုပ်၊ ဒီဟာလုပ် အမိန့်ပေးတဲ့အစိုးရမျိုးကို မလိုချင်ဘူး။ ကျနော်တို့ လိုချင်တာကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် အဖွဲ့အစည်းပဲ လိုချင်တယ်။ စိတ်တိုင်းမကျရင် အချိန်မရေးဖြုတ်လို့ရရမယ်။ နောက်တဖွဲ့ကို စမ်းခန့်ကြည့်မယ်။ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု၊ အကောင်းဆုံးပြည်သူ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ အစိုးရသက်တမ်းကြာမှာပဲ။ အဲဒါ အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည် က ပြည်သူတွေရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရည်မှန်းချက်ပဲ ဖြစ်ပါကြောင်းဗျာ။
ဒီစာပိုက် ဟာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ (ဘုံနိဗ္ဗန်) Communist Utopia ဆန်လွန်းတယ်။ နောက် governance လို့ ခေါ်တဲ့ အစိုးရ ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တယ် ဆိုတာကို (နားမလည်) တာပေါ်လွင်တယ်။
မာ့က်စ်က ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့(ဘုံနိဗ္ဗန်) ကိုရောက်သွားရင် အစိုးရ ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဖူး။ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု ဟာလည်း အမြတ် အစွန်း အတွက် မဟုတ်တော့ဖူး။ လူတွေဟာ မိမိ အစွမ်းရှိသမျှ လုပ်ကြ လိုအပ်သမျှ ကိုပဲ (ရယူ) ကြမယ်ပေါ့။ ဒါကို မာ့က်စ်က (From each according to his ability to each according to his need) လို့ ရေးခဲ့တယ်။
ဒီ မှာ အရေးကြီးတာက မာက့်က်စ် တို့ က (ရုပ်ဝါဒ) ကို အားကိုးပြီး ရုပ်ကိုဦးစားပေး ကြည့် တာကြောင့် (လူတွေ) ရဲ့ (အတ္တ) ၊ (လောဘ) ၊ (ဒေါသ) ၊ (မောဟ) တွေကို အလေးမထားပဲ လူတွေကို စက်ရုပ်သဖွယ် မြင်ကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဒါကြောင့် Marxism ကို တချို့ က Dialectical Materialism လို့ ရည်ညွှန်းကြတယ်။
ဒီမှာ ဒုက္ခ ရောက်ကြတာပဲ
အရှည်ကြီး ရှင်းရမယ်။ နောက် မှ Marxism Capitalism အကြောင်း ဆွေးနွေးမှ အသေးစိပ် ပြောကြရအောင်။
ဒီ စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာ ကို မရောက် ခင် (လိုရာ) ကိုပဲ ထုတ်လုပ် ဖို့ စက်ရုံတွေ ကျောင်းတွေ အဆောက် အဦးတွေ ဘယ်က ရမှာ လဲ? ဒါကြောင့် မာက်စ် က အရင် ဆိုရှယ်လစ် စံနစ်ကို ဖြတ်သန်း ရမယ် (အရင်းအနှီး) စုဆောင်းရဦးမယ်လေ။ ဒီ ဆိုရှယ်လစ် စံနစ်မှာ လူတိုင်းကိုယ် စွမ်းသမျှ အလုပ်လုပ် ကြပြီး- ကိုယ်လုပ်သမျှ ခံစားကြရမယ်တဲ့။ ဒါကို မာ့က်စ် က (From each according to his ability to each according to his work) လို့ ရေးခဲ့တယ်။
ပြန်ကောက်ရရင် ကာ(လ်)မာက်စ် ဟာ သူမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ utopia လို့ခေါ်တဲ့ လူ့ဘုံနိဗ္ဗန် (ဘုံဘ၀) ကိုရောက်ဖို့ အဆင့်(၂) ဆင့် ကိုဖြတ်သန်းရမယ် လို့ အမိန့် ရှိခဲ့တယ်။
(၁) ဆိုရှယ်လစ် အဆင့် -
From each according to his ability to each according to his (work)
(၂) ကွန်မြူနစ် အဆင့် -
From each according to his ability to each according to his (need)
( Critique of the Gotha Program, Karl Marx, 1875 )
မာ့က်စ် စိတ်ကူးယဉ်မှုဟာ ဘယ်နိုင်ငံမှ ဆိုရှယ်လစ် အဆင့် ကို မရောက် လိုက်ရဖူး အကုန်လုံး အတွင်းက လှိုက်စားပြီး ပျက်စီးခြင်း နဲ့ ရင်ဆိုင်ရပြီး အနိစ္စ ရောက်ကုန်ကြတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားမှာ ဆို ယနေ့ လူတွေ ငတ်သေ လမ်းမှာ တွေ့သမျှ ပြောင်းဖူး စေ့တွေကောက်စားကြရရှာတယ်။ ဒါ မာ့က်စ် ရဲ့ ဆိုရှယ်လစ် အသီးအပွင့်တွေလေ။
မာ့က်စ် ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ contribution က Das Kapital ပဲ။ အရင်းရှင် စံနစ်ကို ဝေဖန်သုံးသပ် ထားတာ။ မာက်စ် ၀ါဒ က နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် သာမက တွဲဖက် စီးပွားရေး စံနစ်ပါ ပါလာတယ်။သူ့ကို Planned Economy လို့ ခေါ်တယ်။ အားလုံးကို Plan နဲ့ အားလုံးကို Controlled ထိန်းချုပ်ထားတာ။ ဒါကြောင့် Centrally Planned Economy လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။
ကောင်းပြီ အရင်းရှင် စံနစ်မှာ (အရင်းအနှီး) တွေကို (အရင်းရှင်) တွေက ပိုင်တယ်။ ဒါကလူနဲစု။ လူများစု ဖြစ်တဲ့ (အရင်းမဲ့) အလုပ်သမားတွေက ပစ္စည်းတွေကို (အမြတ်) ရဖို့ ထုတ်လုပ်ပေးရတယ်။ အရင်းရှင် တွေက အမြတ်ထုတ် ခေါင်းပုံဖြတ် ကြတယ်။ ဒါကြောင့်မာ့က်စ် က ပစ္စည်းမဲ့ တော်လှန်ရေး ကို မရှောင်နိုင် ဒီတော်လှန်ရေးက မှ ပစ္စည်းမဲ့အာဏါရှင် စံနစ် ကိုထူထောင်ပြီး (အရင်းရှင်) တွေရဲ့ (အရင်းအနှီး) တွေအားလုံးကို (ပြည်သူပိုင်) သိမ်းရမှာ။
ပစ္စည်းမဲ့အာဏါရှင် စံနစ် အတွေးအခေါ် (concept) ဟာ မာ့က်စ် နဲ့ စခဲ့ပေမဲ့ မာ့က်စ် က အတွေးသမား။ ဒါကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖေါ်သွားသူက လီနင်ဖြစ်တယ်။ မာ့က်စ် ကပစ္စည်းမဲ့အာဏါရှင် စံနစ် ကိုဘယ်လိုဖေါ်ထုတ်ရမလဲ ဆိုတာကို အသေးစိပ် မဖေါ်ပြခဲ့ပေမဲ့ ပြင်သစ်တော်လှမ်ရေးအတွင်း ခေတ္တသာ အသက်ရှည်ခဲ့တဲ့ ပဲရစ်ကွန်မြူး Paris Commune ကို ဥပမာ အဖြစ်လက်ငြှိုးထိုးပြခဲ့တယ်။
၁၉၂၁ ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ ၁၀ ကြိမ်မြောက် ပါတီကွန်ကရက် အစည်းအဝေး မှာ လီနင်က ပါတီဟာ အမြင်တွေအားလုံးကို လက်ခံ ခွင့်လွှတ် လွပ်လွပ်လပ်လပ် ထုတ်ဖေါ်ငြင်းဆိုနေရမဲ့ စကားရည်လုပွဲ လူ့အဖွဲ့အစည်း (Debating Society) မဟုတ်ဖူး။ ပါတီဟာ (ဦးဆောင်ပါတီ) ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် တော်လှန်ရေးရဲ့ ခေါင်း ဆောင်အနေနဲ့ အဆင့်မြင့်တဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ စည်းကမ်း ရှိမှုလိုတယ်။ အထိမ်းအကွပ်မရှိတဲ့ (ဆွေးနွေးမှု) တွေဟာ ပါတီအတွင်း သဘောမတူညီမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေကာ အုပ်စုတွေ ကို ဖြစ်ပေါ် စေပြီး ပါတီ၏ ထိရောက်မှုကို နှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်။ တဖက်ကလည်း ဗဟို ထိမ်းချုပ်မှုဟာ လုံးဝဥသုံတင်းကြပ်ခဲ့ ရင်အောက်ခြေက တွေးခေါ်မှု အသစ် ပေါ်ထွက်လာမှုကို ဟန့်တားရာရောက်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ပါတီအတွင်းမှာ အတိုင်းအတာ တခုအထိ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ပြောပါစေ။ အေး မဲခွဲဆုံးဖြတ် ပြီးရင်တော့ ဆွေးနွေးမှုတွေ အားလုံးရပ်ဆဲ စေရမယ်လိုဆိုခဲ့တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရင် (အများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်) ဟာလက်ရှိ ပါတီလိုင်း ဖြစ်စေ ရမယ်။ ပါတီဝင် အားလုံး လိုက်နာစေရမယ် လို့လီနင်ကဆိုခဲ့တယ်။
(ပါတီအတွင်းဒီမိုကရေစီ) ဆိုတာ ဒါကို ရည်ညွှန်းကြတာ။ ဒါကြောင့် ဗကပ တွေ အတွက် ကွန်မြူနစ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ် လာရင် ပါတီဆုံးဖြတ်တာလိုက်နာပါ့မယ် လို့ အကြိမ်ကြိမ် ရေရွတ်ကြ ရတာ။ သခင် ဗသိန်းတင် ရဲ့ ဗဟိုက ဗဟိုအတွင်း အတော်လွပ်လွပ်လပ်လပ် ဆွေးနွေး ခွင့်ပြု့တယ် လို့ဆို တယ်။
ဒီဖက် ခေတ်မှာ ဒီမိုကရေစီ ခေတ်စားလာတော့ ကွန်မြူနစ်တွေကလည်း အသံကုန် ဒီမိ်ုကရေစီ အော် နေကြလေရဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူတို့အော်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီက လီနင်ရဲ့ ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ။ လီနင် ရဲ့State and Revolution မှာ Proletarian democracy အကြောင်းကိုရေးပြထားတယ်။ လီနင်တို့ ပြောတဲ့ ဘူဇွာဒီမိုကရေစီဆိုတာက ယနေ့ လူုတိုင်းတောင်းတတဲ့ လစ်ဖရယ် ဒီမိုကရေစီပဲ။ လီနင်ရေးတဲ့ The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky:Bourgeois And Proletarian Democracy ကိုဖြတ်ကြည့်ပါ။ မာ့က်စ် တို့ လီနင်တို့ ရဲ့ ဒီမိုကရေစီက Participatory Democracy ဖြစ်တယ်။ လစ်ဖရယ် ဒီမိုကရေစီက Representative Democracy လို့ခေါ်တယ်။ ဒါတွေကို ရှင်းရရင် Academic ဆန်သွားမယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်း နားလွယ် တဲ့နည်းနဲ့ပြောရင် ၊ လစ်ဖရယ်ဒီမိုကရေစီမှာ လူတိုင်း မဲပေးခွင့်ရှိတယ်။ အသဲကြားကမဲတပြားနဲ့ မိမိကို ကိုယ်စားပြုမဲ့ မိမိကိုယ်စားလှယ် (representative) ကို ရွေးခွင့်ရှိတယ်။ သတ်မှတ်ထား တဲ့ သက်တန်းကုန်ရင် မိမိကို အစိုးရ အုပ်ချုပ်သူကို အများစုက မလိုလားရင် ဖြုတ်ချခွင့်ရှိတယ်။ လီနင် တို့ရဲ့ ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာက (ပါတီ) ကေတာတွေပဲ (မဲပေးပိုင်ခွင့် ) ရှိတာ။ ပြည်သူတွေမဲပေးခွင့်မရှိကြပါ။ ကွန်မြူနစ်တွေ အာဏါရပြီးရင် ရှေ့ကိုဆက်ခြေတက်ဖို့ပဲရှိတယ်။ တရုတ်ပြည် ၊ ကျူးဗား ၊ မြောက်ကိုရီးယား တွေမှာ ကွန်မြူနစ် ပါတီတွေက အုပ်ချုပ်နေတုန်းပဲလေ။ ပြည်သူတွေကနင်းပြား။ အစိုးရ ကိုရွေးချယ်ဖို့ နေနေ သာသာ ဝေဖန်ရင်တောင် အဖမ်းခံရ အထုခံရ အသတ်ခံရတာ။
ဒါကြောင့် လစ်ဖရယ် ဒီမိုကရေစီ နဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ ပါတီတွင်းဒီမိုကရေစီဟာ ဆီနဲ့ရေလို ပဲကွာတယ်။ လူငယ်လေးတွေ ကို (ခွဲခြား) သိစေချင်လို့ပါ။
မာ့က်စ် အကြောင်းပြောရင် (စိတ်ထင်ရာ) လက်လွပ်စပယ်ပြောလို့မရဖူး။ ချိုတူးဇော် ညွှန်းသလို ပါတီတွင်း လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ပြောဆိုခွင့်တွေ၊ နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပြောဆို ခွင့် တွေ အပြည့်ပါတယ် ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ တပါတီစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆို တဲ့နေရာမှာ ပါတီအတွင်း ဒီမိုကရေစီကတော့ ရှင်းပြီ ဘယ်မှာ (နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပြောဆို ခွင့် တွေ အပြည့်ပါတယ်) ဆိုတာကို မာ့က်စ် ကရေးပြ ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ညွှန်းပြပေးပါလား။ ဆရာကြီးစီက ကြားတာလို့တော့ မပြောနဲ့နော်။ ဘယ်တုန်းက ဘယ်ကွန်မြူ နစ်နိုင်ငံ မှာ နိုင်ငံသားတိုင်း လွပ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပြောဆိုခွင့်တွေ ပေးဖူးပါသလဲ? ၁၉၅၇ နွေဦးမှာ တရုတ်ပြည်မှာ Hundred Flowers Campaign ဆိုပြီး (ပန်းမျိုးတရာ ပွင့်ပါစေ) ဆိုလိုက်တာကြောင့် အသံမျိုးစုံ ထွက်လာတော့ နှိပ်ကွပ်လိုက်ရတာ ပြောဆိုခွင့်ဟာ ခြောက် ပတ် (six weeks) တောင် မခံ လိုက်ဖူး မဟုတ် လား?
ဒီမှာ အလံဖြူ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ အားနဲချက် တခုကိုတင်ပြ ပါရစေ။
စာပေလောက မှာ ကွန်မြူနစ် လိုလားသူတွေနဲ့ လွှမ်းမိုးထားတယ်။ တခါ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ဘာလုပ်လုပ် ၀ါဒဖြန့်ချီရေးက ခေါင်းထဲဆွဲ နေတယ်။ သူတို့ကိုထိရင် ကျီးကန်းတွေလို ၀ိုင်းအာလိုက်ကြ သေး။ ဒါကြောင့် ကွန်မြူနစ်တွေကို ဝေဖန်ရဲ တဲ့ သူမရှိလှ။ ဟိုအရင် က စာရေးကောင်းတဲ့ ရန်ကုန် ဘဆွေ တယောက်လောက်သာ ထင်ရှားတယ်။ ဒါကြောင့် သခင်တင်မြ ဟာကွန်ုမြူနစ် ဥါဉ်မပျောက် သေးပဲ ခုထိ ရန်ကုန် ဘဆွေ ကိုပြန်ရေးနေဆဲ။ ဒီလို အသာစီးရထားတော့ ကွန်မြူနစ်တွေဟာ ပျက်စီး Spoilt ဖြစ်လာ တယ်။ ရေးချင်တာတွေအရမ်းရေးလာကြတယ်။ ဥါဏ်မမှီတဲ့ မိမိ အတွေးအမြင်တွေကို ရာဇ၀င်အချက်အလက် နေရာမှာ အစားထိုး။ ထောက်ပြတော့ ဖင်လှန်ငြင်း။ ရာဇ၀င် အချက်အလက် ကို မပြင်ရဖူး ဆို တာ တောင် (အသိ) မရှိ။ မနိုင်တော့ (လိုလို) ဆိုပြီး ညာငြင်သေး။မနိုင်တော့ ခင်ဗျား ထက် ညစ်ပတ် တာ ခင်ဗျားအဖေပဲရှိတယ် ဆိုပြီး ပုဂ္ဂိုရ်ရေး ဆော်ကားတာတွေပါလာတယ်။
ဟောအခုလည်း ပြောနိုင်တဲ့သူ မရှိဖူးထင်ပြီး သုံးလေးကြောင်းလောက်ရေးပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ ထင်မြင် ချက်တွေရေး။ ပညာတတ်တွေ အီလစ်တွေ မကောင်းဖူး။ တိန်လျောက်ပိန်ကို လည်း ဝေဖန် လာသေး တယ်။ အရည်းကြီးကို ဆရာတင်မိ တဲ့လူငယ်တွေအဖို့ကတော့ ဆရာကြီးပြောတာကို ဦးထိပ်ထားပြီး တခါ လျောက်ရေး၊ ဝေလေလေတွေကထောက်ခံ၊ စိတ်ကြေနပ်မှုတွေရကြပြီး ၊ (အသိ) အမှားတွေနဲ့ သံသရာ လည်ကုန်ကြရော။ စာဖတ်ထားတဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့မှ ထောက်ပြတော့ ကားရားကြီး အရှက် ကွဲရရော။
ဒါကြောင့် ရာဇ၀င် အချက်အလက် တွေ ၊ ၀ါဒရေးရာတွေ ရေးရင် သတိရှိရတယ်။ မိမိ ရဲ့ (အသိစွမ်းအား) capacity ( နဲ ) လို့ (နားလည်လွဲ) နိုင်တာရှိသလို အင်္ဂလိပ် ဘာသာလည်း ကျွမ်းရမယ်။ စကားလုံး အသုံးအနှုံး ကို အဓိပ္ပါယ်အကောက် လွဲရင် (နားလည်မှု) လုံးဝလွဲ သွားနိုင်တယ်။ Lost in translation လို့ ခေါ်တာပေါ့။ နောက်တခါ ဘာသာ ရပ်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုံးတွေကိုလည်း နားလည်ရမယ်။ အထူးသဖြင့် မာ့က်စ် တို့လို တကယ့် ပညာ ရှင်တွေရေးတာကို နားလည်ဖို့ဆို မလွယ်ပါ။ ဒါကြောင့် မာ့က်စ် ဘာပြောသလဲဆိုပြီး သိရ အောင် ချက်ချင်းသွားဖတ်လို့ မရဖူး။ knowledge base ရှိမှ။ ဒီအသိ က accumulated knowledge တသက်လုံး စာဖတ်လေ့လာစုဆောင်းတိုးပွား အောင်လုပ်ရတာ။ နောက်သတိ ရှိဖို့က Wikipedia မှာပါတိုင်း မမှန်ဖူး။ ပိုနက်တဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဌါန တွေမှာရှာရမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် မာ့က်စ် တို့လီနင် တို့ရေးတာတွေကို ကိုးကားနိုင်ရမယ်။လီနင်တောင် ကာလ် ကောက်စကီ (Karl Kautsky) ရဲ့ Marxism and Bolshevism: Democracy and Dictatorship ကိုချေပတော့ မာ့က်စ် တို့ရဲ့ အရေးအသား တွေကိုပြန် ကိုးကား ရတာပဲ။
မာ့က်စ် က ပစ္စည်းမဲ့တို့၏အာဏါရှင်စံနစ် ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးကို ဇန္န၀ါရီ ၁၈၅၀ ခုမှာရေးပြီး မတ်လမှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Class Struggles in France 1848-1850 ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ စတင် သုံးခဲ့ တာဖြစ် တယ်။ Marx and the Dictatorship of the Proletariat (1918) by Julius Martov ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ မာ့က်စ်ရဲ့ အတွေး ကိုသိ ပိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Marxism ဆိုတာ အာဏါရှင် မဟုတ်ဖူးလို့ ဆရာကြီး ကို ကာကွယ်လိုစိတ်နဲ့ ငြင်း လို့တော့ ရပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ နွံနစ်ရင် လှုပ်လေနစ် လေ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
ကွန်မြူနစ် ဆရာအို အရည်းကြီးနဲ့ ဗမာကွန်မြူနစ်တွေ ယနေ့ အထိ အသဲစွဲ ကျန်လျက်ရှိတဲ့ (ဗဟိုဦးစီးစံနစ်) ဆိုတာ လီနင်ရဲ့ (ဗဟိုဦးစီးစံနစ်) ပဲ။ သူတို့ ယနေ့ အထိ သဘောမပေါက် သေးတာ က ကွန်မြူနစ်ပါတီ အားလုံး ပျက်စီးရတာဟာ ဒီ (ဗဟိုဦးစီးစံနစ်) ကြောင့်ပဲ။ နိုင်ငံရေးအရ (ဗဟိုဦးစီးစံနစ်) ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းမဲ့အာဏါရှင် စံနစ် ကို အသေကိုင်ထားပြီး စီးပွာရေးအရ မာ့က်စ် ရဲ့ Planned Economy ကြီးကို အတင်းဖေါ်ထုတ်ကြတာကြောင့် ကွန်မြူနစ် စံနစ်ကြီး ဟာ ကျဆုံးပြီး မြောင်းထဲရောက် သွားရတာ။
အဲဒီတော့ ပစ္စည်းမဲ့ တော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲအပြီးမှာ အရင်းရှင်တွေရဲ့အရင်းအနှီးတွေကို အာဏါရှင် တို့ရဲ့ အာဏါမသုံးပဲ ဘယ်လို (ပြည်သူပိုင်) သိမ်းယူမှာလဲ? လစ်ဖရယ် ဒီမိုကရေစီ မှာ Rule-of-Law ရှိတယ်။ လျှော် ကြေးပေးရမယ်။အားလုံးကို သိမ်းလို့မရ။ဒါကြောင့် ပစ္စည်းမဲ့အာဏါရှင်စံနစ်ကို တည်ဆောက်ရတာ။ ဒါပေမဲ့ (လူ) တွေရဲ့ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ပစ္စည်းမဲ့အာဏါရှင်စံနစ် ဆိုတာလည်း ပျက်စီးရတာပဲ။
ဒါကြောင့် မာ့က်စ် ၀ါဒ ကိုယုံ ရင် အထူးသဖြင့် မာ့က်စ်-လီနင် ၀ါဒလို့ ခေါ်တဲ့ ကွန်မြူ နစ်ဝါဒ ကို လက်ခံရင် ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေးလို့ နားလည်ကြတဲ့ planned economy ကို ကျင့်သုံးရမယ်။ ပြည်သူပိုင်သိမ်းရမယ်။ပစ္စည်းမဲ့အာဏါရှင်စံနစ် ကို တည်ဆောက်ကိုတည်ဆောက် ရမယ်။ ဒါကြောင့် မာ့က်စ် ၀ါဒကို ကျေကျေညက်ညက် နားမလည်ရင်တော်သေးရဲ့ ၊ သိလျက် ၀ါဒဖြန့်ချီရေး အ တွက် (အမှန်) ကို မပြောရင် dishonest ဖြစ်တာာ (ညာ) တာ ပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
တခုပဲရှိတယ် - တချို့ ပညာရှင်တွေက မာ့က်စ်က (class dictatorship) လူတန်းစားတခုလုံးရဲ့ အာဏါရှင် စံနစ် ဖြစ်တဲ့အတွက် လူတဦးထဲ ကအုပ်စိုးတဲ့ သာမန်ရိုးကျ လို့ပြောလို့ရတဲ့ classical dictatorship မဟုတ်ဖူးလို့ ပြောကြတယ်။ နောက်ပိုင်း စတာလင် က စပြီးဘာဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာ ပြောစရာ မလိုတော့ပါဖူး။
အာဏါရှင် စံနစ်ဟာ ဘယ်ပုံနဲ့လာလာ အတူတူ ကြီးပါပဲ။ ဗမာတွေ သိသင့်ပါပြီ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ကတည်းက အာဏါရှင်အောက် နေလာကြပြီး အာဏါရှင်စံနစ် ကို အကောင်း ထင်နေသေးရင် ဥါဏ်နဲတာလား မိုက်မဲတာလား တခုခုပဲ။
ပစ္စည်းမဲ့ အာဏါရှင်စံနစ် ကို (ပိုသိချင်) ရင်….. K Marx , Letter to Weydemeyer,5Mar. 1852, in D McLellan (ed.), Karl Marx: Selected Writings (Oxford, 1977). ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
ပညာနဲ့ အသိ ရှာတဲ့နေရာမှာ (စာအုပ်) ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ အင်တာနက် ခေတ်မှာ အပေါ်ယံကြော ဖတ်ပြီး ငါနားလည်ပြီးလို့ ထင်တဲ့ သူတွေက အများသား။ ဒီအပေါ်မှာ ဒိဋ္ဌိ အရည်းကြီးတွေရဲ့ ဗရန်းဗတာ ဟောကြားချက်တွေ ထပ်ဆင့်လိုက်တော့ အလွဲလွဲ အချော်ချော် တွေဖြစ်ကုန်ရော။ ဒါကို ထပ်ဆင့် ပို့ချကြတော့ ပုဂ္ဂိုရ်ရေး လိုက်ပြီး (အိုကောင်းလှချည်ရဲ့) ဆိုတဲ့ ဝေလေလေ တွေက အမှားတွေထပ်ဆင့် ထပ်ဖြန့် နဲ့ အကန်းတွေအကန်းနောက် လိုက်တာမျိုး ဖြစ်မှာဆိုးလို့ပါ။
Pipe Piper of Hamelin ဆိုတာကြားဖူးကြမှာပါ။ ပထမကြွက်တွေကို ပုလွေမှုတ် ခေါ်သွားပြီး မြို့သူမြို့သားတွေက ပိုက်ဆံမပေးလို့ သူရဲ့ ပုလွေမှုတ်ပြီး မြို့က ခလေးတွေကို ခေါ်ထုတ်သွားတာ ပြန်မရောက်လာကြဖူးတဲ့ ……. ၀ါဒ အစွဲ ဆိုတာ Pipe Piper ရဲ့ Magic လိုပဲ ကြောက်စရာ ကောင်း တယ်။ နောက်ကသာ လိုက်နေကြတာ Pipe Piper ကိုယ်တိုင် က အကန်းကြီး ဆိုရင် အခန့်မသင့် ရင် ဂျောက်ထဲကျသွားနိုင်တယ်နော် …. သတိရှိကြပါ။
စိတ်တော့မရှိပါနဲ့နော် ဒါပေမဲ့ အဒမ်စမစ်ရဲ့ အမြတ်ပဓာန အရင်းရှင်စနစ်ဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာပဲ ကိုလိုနီစနစ်နဲ့အတူ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းသွားခဲ့တယ် လို့ ပြတ်ပြတ်သားသား မြင်ပါတယ်။ အဒမ်စမစ်ရဲ့အမြတ်ပဓာနအရင်းရှင်စနစ်က ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်ပြီးကတည်းက ချုပ်ငြိမ်းခဲ့ပြီးသားပါ။
ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဆိုတာ အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ မတူပါဘူး။ အနှစ်သာရမှာ အရမ်းကို ကွဲပြားပါတယ်။ အမည်နာမ အခေါ်အဝေါ်မှာတင် သိသိသာသာ ကွဲပြားပါတယ်။
ဂျိုးဇက်မက္ကာသီ ကြောင့် ယိုင်နဲ့ခဲ့ရတဲ့ ဒီမိုကရေစီကို အချိန်မီပြုပြင်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ အချိန်မီဆေးကုအဖတ်ဆည်ခဲ့နိုင်လို့ပေါ့။
ဒီနေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ကော်ပိုးရေးရှင်းတွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေကို မလှုပ်နိုင်မယှက်နိုင်အောင် ဥပဒေတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ ကန့်သတ်ထားတာ တကယ့်ကို ဆိုရှယ်လစ်ဆန်ဆန်ဖြစ်ဖြစ်နေပါပြီ။ လက်ရှိ ကမ္ဘာမှာ အလုပ်သမားအခွင့် အရေးအများ ဆုံးရထားတာလည်း အမေရိကပါ။
ဒီရေးသားချက်တွေဟာ တခုမှ မမှန်ဖူး လို့ ငြင်းချက်ထုတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒီအတွေးအခေါ်တွေ ဘယ်က စီးဆင်းလာသလဲ? ဆိုတာလည်း ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။
ခဏလေး သည်းညည်းခံ။ စိတ်ဝင်စားတာလေးတခု ရေးနေလို့ အချိန် မပေးနိုင်သေးလို့ နောက်မှ မာ့က်စ် ၀ါဒရော အရင်းရှင်စံနစ်နဲ့ လက်ရှိ စီးပွားရေးပြဿနာလေးတွေကို ဆွေးနွေးရအောင်
စီးပွားရေးဟာ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံရေးစိတ် ၀င်စားရင် စီးပွားရေးကို သိ သင့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်းရှင် စီးပွားရေး ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေးတွေကို နားလည်ဖို့ စီးပွားရေး အခြေခံ တွေကို နားလည်ရမယ်။ ဒါမှ economic terms တွေကိုနားလည်မယ်။ economy အောက် မှာ market ။ သူ့အောက် မှာမှ market segment ဆိုတာတွေရှိတယ်။ energy အောက်မှာ crude oil – gas – coal – renewable ဆိုပြီးရှိသလိုပေါ့။ theories ဆိုရာမှာလည်း supply-side တို့ trickle-down တို့ရှိပြန်တယ်။ တီအန်မင် ကိစ္စမှာ ပြုတ်သွားတဲ့ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ကျောက်စီးယန်းရဲ့ စာအုပ်မှာ relative advantages ကို open market policy နဲ့ လက်တွေ့ ဥပမာ တွေနဲ့ ရှင်းသွားတာ ဘယ် လိုကောင်းမှန်းမသိဖူး။
နိုင်ငံရေးအတွက် macro economics ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကစားနည်းတွေက ပိုရှုပ်ထွေးလာတယ်။ ဥပမာ QE Quantitative Easing ဆိုတာကိုနားမလည်ပဲ လက်ရှိ dollar imported inflation ဆိုတာကို နားလည်ဖို့ ခက်သွားတယ်။ finance ကိုနားလည်မှ currency imbalance တို့ကိုနားလည်မယ်။ ဒါမှ hedge funds တွေ နဲ့ investment bankers တွေရဲ့ currency manipulation လုပ်တာတွေ ကိုနားလည် မယ်။ Bond yield spreads နဲ့ credit default swaps ရဲ့ risk insurance အန္တရာယ် ကိုသိမှ လောလောဆယ် ဥရောပမှာ ဖြစ်နေတဲ့ sovereign debt issues ကိုနားလည်မယ်။ stocks and bonds တွေမပိုင်ဆိုင်ဖူး ပဲ စာတွေ့တခုထဲနဲ့ intricacies တွေကိုတကယ် ကျွမ်းကျွမ်းး ကျင်ကျင် နားလည်ဖို့ခက်တယ်။ တခုနဲ့တခု ဆက်နေတာကို သိစေချင်တာပါ။ ဘာသာ ရပ်တခု ထဲတွင် သိစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ လက်တွေ့ (အသိ) မရှိပဲ (စာတွေ့) တခုထဲနဲ့ နား လည် ဖို့ မလွယ်ဖူးဆိုတာသိစေချင်တာပါ။ ကိုယ်ကမကျွမ်းရင် 1997 Asian Financial Crisis တုန်း ကလို သူများ ပြုသမျှ - နု ကြရမယ်။
နောက် စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ရတာနဲ့ လက်တွေ့ရောက်ဖူး မြင်ဖူး ကြုံဖူး တာမတူဖူး။ ရောက်ဖူး ပေမဲ့လည်း Tourist လိုရောက်ဖူးတာနဲ့ local – native လိုနေ ဖူးတာမတူဖူး။ စိတ်ဝင်စားမှ လေ့လာမှ။ အမေရိကားရောက်ပြီး ဗမာလိုနေ နေသူတွေ အများကြီး။ သောက်စားမူုးရစ်ပြီး (လုပ်) အမေရိကန် ဖြစ်နေကြသူတွေလည်းအများကြီး။ ကမ္ဘာပတ် ဖူး ပြီး နိုင် ငံပေါင်း စုံရောက်ဖူး မြင်ဖူးရင် exposure ရှိတယ်ခေါ်တယ်။ exposure ရှိသူနဲ့ တနေရာထဲ အသေထိုင်ပြီး စာအုပ်ထဲက (အသိ) ရသူတို့ရဲ့ (အမြင်) မတူတာတွေရှိ နိုင်တာပေါ့။ အမေရိကားမှာ အနှစ် ၂၅ ကျော်ကျော် နေခဲ့ တဲ့သူက စာအုပ်ဖတ်ပြီး အမေရိကန် ကို ကလော် ဆဲနေသူတွေပြောတာကို လက်ခံရ မခက်နိုင် ဖူးလား?
လစ်ဖရယ် ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာက နိုင်ငံရေးစံနစ်
Capitalism အရင်းရှင် စံနစ်ဆိုတာက စီးပွားရေးစံနစ်။
နှစ် ခုစလုံး ဟာ လူတိုင်းကို (အခွင့်အရေး) ပေးတာကြောင့် အောင်မြင်တာ။အရင်းရှင်စံနစ် အောက်က ဈေးကွက်စီးပွားရေးကို အာဏာရှင် စံနစ်အောက်မှာ တည်ဆောက်ရင် Crony Capitalism ရောင်းရင်းအရင်းရှင်စံနစ် ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါကြောင့် န၀တ-နအဖ အောက်မှာ ဈေးကွက်စီးပွားရေး စံနစ်ကို ကျင့်သုံးပေမဲ့ Crony Capitalism ရောင်းရင်းအရင်းရှင်စံနစ် ဆီဦးတည်သွားတာပဲ မဟုတ်လား? အာရပ် နိုင်ငံတွေ ရုရှားမှာ အားလုံး မှာ Crony Capitalism တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီး အာရပ် Spring ဖြစ်လာရတာလေ။ ဗမာနိုင်ငံမှာ ဈေးကွက် စီးပွား ရေးဆိုတာကို ကျင့်သုံးတယ်ဆိုပေမဲ့ တကယ်ကျင့်သုံးတာ ကာက economics term အရ (rent) လို့ခေါ်တဲ့ ငှားစားတဲ့ အဆင့် သာသာလေးရှိတယ်။ စစ်စကားနဲ့ပြောရရင် နယ် မြေစိုးမိုးပြီး (ဆက်ကြေး) – toll ကောက်စားတာပဲ။ ထုတ်လုပ်မှု ကိုအားပေးတာမဟုတ်ဖူး။ regulation နဲ့ ညှစ်ပြီး အခွင့်အရေး ဖေါ် - ငွေ- ဖေါ်စားတာ။ ဒါကြောင့် လူရင်းတွေပဲ အခွင့်အရေး ရပြီး လူရင်း (Cronies) တွေပဲ ချမ်းသာကုန်တာ။
ဒီနေရာမှာ ဖြတ်ပြီး အရင်းရှင်စံနစ် နဲ့ ဈေးကွက် စီးပွားရေး အကြောင်းနဲနဲပြောပါရစေ။ ဈေးကွက် စီးပွားရေး ဆိုတာက ဈေးကွက်မှာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း goods နဲ့ အလုပ်စွမ်းအား services တို့ရဲ့ တန်ဖိုးကို ရောင်းအား- ၀ယ်အား အပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးကွက်ကဆုံးဖြတ်တဲ့ စီးပွားရေးကိုခေါ်တာ။ သူ့ရဲ့ ပြောင်းပြန် က ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေးးအောက်မှာကျင့်သုံးတဲ့ controlled markeထိန်းချုပ် ဈေးကွက်ဖြစ် တယ်။ ဒီလို ဈေးကွက်က ဆုံးဖြတ်တဲ့ စီးပွားရေးဟာ အားလုံးကို ပေးစားတဲ့ (၀ါ) တဦးချင်းအခွင့်အရေး Individual rights ကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အရင်းရှင် စံနစ်အောက်မှပဲ ရေရှည် ရှင်သန်ကြီးထွားတယ်လို့ ငြင်း လို့ရနိုင်တယ်။ အတန်စမစ် (Adam Smith) ရဲ့နံမည်ကျော်တဲ့ (မမြင်ရတဲ့လက်) Invisible Hand က ဈေးကွက်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ ဟောာ ကြားချက် ခုထိ (မှန်ကန်) တုန်းပဲ။ စမစ်က ဒီ (မမြင်ရတဲ့လက်) ကို အတ္တ (Self Interest) ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှု (Competition) ၊ ရောင်းအား- ၀ယ်အား (Supply & Demand) တို့က ဖေါ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်လို့ ဆိုခဲ့တယ်။ အရင်းရှင် မရှိပဲ ဘယ်သူက ဈေးကွက်ကို ဖေါ်ထုတ်မှာလည်း?
ဈေးကွက်စီးပွားရေးစံနစ်က Wealth Exchange။ အရင်းရှင်စံနစ်က Wealth Creation လို့ နားလည်ရင် ပိုလွယ်သွားနိုင်တယ်။
သတိရှိဖို့က အရင်းရှင် စံနစ်မှာ (အတ္တ) နဲ့(လောဘ) ကို လက်နက် အဖြစ် အသုံးပြုတာကြောင့် (လောဘ) ဇော်အားကြီးကြပြီး ၂၀၀၇-၂၀၀၈ မှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ စီးပွားရေးဒုက္ခ ဆိုက်ရောက်ရတာကိုး။ ဒီမှာ ကိန်း (Keynes) ရဲ့ တွေးခေါ်ချက်က (လိုအပ်) လာပြန်တယ်။ ကိန်း ကဘာပြောလည်း ဆိုတော့ တခါတရံ မထိမ်းနိုင် မသိမ်းနိုင် (ဈေး) တက်တတ်ပြီး ထိန်းရခက်တဲ့ စီးပွားရေးကျဆင်းမှု recession ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အစိုရကန္တ Public sector က ၀င်ပြီး စီးပွာရေးတည်ငြိမ်ဖို့ ပေါ်လစီ ချကာ ၀င်ထိန်း ကျောင်း ပေးရမယ်လို့ ဆိုတာ။
နောက်ဆုံးတော့ ဘုရားဟောတဲ့ အလယ်အလတ် မဇ္ဈိမပဋိပတာ ပဲရောက်လာတာပဲလေ။ လက်ရှိ wall Street က အရင်းရှင်တွေ အစွန်းရောက် ရမ်းကားနေချိန်မှာ တိန်လျောက်ပိန်ရဲ့ တရုတ်တွေက ခေါင်း အေးအေး နဲ့ အစိုးရကထိန်းသွားပေးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေက တရုတ်တွေကို ပိုလေးစား လာ ကြပြီး Bejing Consensus ကို Washington Consensus ထက် ပိုစိတ်ဝင်စားကာ တရုတ်တွေမျက်နှာ ပို ကြီးလာကြတယ်။ လက်ရှိတရုတ် ခေါင်းဆောင်တွေဟာ စီးပွားရေးကို အမေရိကန်တွေ ခေါင်းဆောင် တွေ ထက် ပိုနား လည် ကျွမ်းကျင်တာကိုတော့ ငြင်းလို့မရ။
Posted by Freedom Burma at 17:56